SIDA LOOGA ADKAADO CUDURADA WAAWEYN IYO CAYAYAANKA SPATHIPHYLLUM, TABAHA YAR YAR - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Cudurada iyo cayayaanka ee spathypilumum, sida loo sugo "farxadda dumarka"
Xayawaanku waxay aad u jecel yihiin Spathiphyllums, maaddaama ubaxyadaasi aanay ahayn kuwo la isku qurxiyo, waxay ku kori karaan meel haraaga ah isla markaana wakhti isku mid ah waxay ku farxi doonaan cagaarka cagaaran iyo ubaxyo soo jiidasho leh. Laakiin waxaas oo dhan way sii socon doonaan illaa inta hoorka loo yaqaan "pathogen" ama calaamadaha kale ee cudurka ka muuqda caleemaha spathiphyllum, oo isla markiiba loo daaweeyo.
Laga soo bilaabo saldhigga asliga ah, iyo sida loola dagaalamo
Tilmaamidda cudurkan waa in marka warshad waxyeello soo gaarto, calaamadaha ugu horreeya ee kalluunka waxa muuqanaya kaliya saldhigga. Sababtan awgeed, dad yar ayaa ogaanaya. Laakiin waqti ka dib, kalluunka waxa uu bilaabmaa inuu kor u fido, caleemaha shakhsiga ah, sababtoo ah waxay bilaabaan inay huruud noqdaan oo ugu dambeyntii qalalaan. Muuqaal kale oo cudur ah - guul darradu waxay lahaan kartaa hal dhinac oo keliya ee geedka, halka kan labaadna uu sii wadi doono cagaar. Haddii aadan fiiro gaarin waqtigeeda, dhirta ayaa gebi ahaanba qalajin kara, maadaama uu ubax ka soo baxayo salka cawsku si tartiib ah u iman doono xididada.
Nasiib darro, ka takhalusidda kallana way ku dhowdahay, waxaad kaliya ka hortagi kartaa dhacdadeeda. Tani waxay ubaahantahay dooran kaliya dhirta caafimaad leh ee beerashada, iyo inta lagu jiro dhalmo joojinta isku dayin in ay waxyeello iyaga, maadaama ay qudhuntu ka samaysan karto meelaha dhibta leh. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ilaaliyo "nadaafadda" inta lagu jiro gudniinka iyo daaweynta spathiphyllum: Dhammaan qalabka iyo dheriyada waa in la nadiifiyaa ka hor inta aan la beeri. Waad ku mahadsantahay ficilada fudud ee aad u baahantahay inaadan ka fekerin sababta uu spathiphyllum u ciribtiro.
Ma taqaanaa? Spathiphyllum waxay leedahay magac kale - "farxad haween ah." Waxaa la rumeysan yahay in haddii gabadh ay ubaxaan ubaxaan gurigeeda, waxay ugu dhaqsiyaha badan u heli doontaa in ay kufaarato oo ay awooddo in ay guursato jacaylka.
Root rot: waxa la sameeyo kiiskan
Laakiin haddii caleemaha Spathiphyllum marka hore ay lumiyaan iftiinkooda, ugu dambeynna waxay noqdaan huruud dhammaantood, oo markaa ubaxa waxay u badan tahay inuu ku dhaco cudur sida rootka rootka. Waqti ka dib, xididdada ubaxa waxay noqdaan kuwo aad u jilicsan oo jilicsan, qaybta sare waxay bilaabmaysaa inay timaaddo.
Faafidda caleemaha xididku waxay badanaa keentaa in la beero ubax carrada oo leh aalado hooseeya, iyo sidoo kale waraabin aad u daran, taas oo ciidda xitaa aysan haysan waqti ay qalalaan.
Nasiib darro, laakiin cudurradaas spathiphyllum iyo daaweyntoodu ma suurtoobi karaan, ubaxa had iyo jeer waa in la tuuraa. Laakiin si looga hortago kallana Waa muhiim in la isticmaalo talooyinka soo socda:
Markaad gawracato warshad, hubso inaad daaweyso nidaamkeeda asaasiga ah adigoo ka caawinaya biopreparation "Glyocladin".
Wixii beerista ee spathiphyllum, iibso ciidda gaarka ah, sababtoo ah dusha mooye oo keliya ayaa ku haboon.
Biyuhu ubax badan, laakiin sida ugu macquulsan. Ka hor intaadan waraabin, hubi qoyaanka ciidda markasta - haddii ay weli qoyan yihiin, iska dhig biyaha warmo dhowr maalmood ah.
Daawada kaneecada, isticmaal daroogooyinka sida Fitosporin-M iyo Alirin-B, taas oo lagu badhxi karo biyo sida waafaqsan tilmaamaha oo ku dar ubax.
Dheecaan dambe iyo daaweyntiisa
Waxaa ka mid ah cudurada Spathiphyllum, firfircoonaado soo daahay ayaa sidoo kale jira, taas oo la mid ah sida kallana ka soo saldhigga ah ee afkoda. Foomamka cirridka ah ee ku dhaca qoorta xididka ubaxa iyo, waqti ka dib, waxay awood u leeyihiin inay si buuxda u faafiyaan geedka oo dhan, si tartiib ah u dilaan. Wakiilka keena dabayaaqadii dambe waa fungus kaas oo si dhakhso ah ugu dhufan kara jawi qoyan oo leh xayawaankiisa. Sababtan awgeed oo ah warshad cudur leh oo leh xoog wax burburin ah waa in la burburiyaa (Waxaa ugu wanaagsan in la gubo si loo joojiyo koritaanka fungus).
Haddii mid ka mid ah gurigaaga ugu yaraan uu u muuqday faallooyin dabayaaqadii dambe, ka dibna intiisa kale waa in lagu daaweeyaa daawooyinka oo kordhiya caabbinta dhirta. Ujeedadaas, waxaad isticmaali kartaa "Ridomil Gold" ama "Alet". Dhuxulo leh spathiphyllum kiiskani waa inuu haystaa dhulka, isaga oo isku dayaya in uu biyo u yareeyo intii suuragal ah.
Qiyaas ahaan ka hortaga Spathiphyllum, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa daawooyinka "Fitosporin-M", "Alirin-B", "Gamain-B" iyo "Planriz", waxa ugu muhiimsan maaha in la isticmaalo daawooyinkooda.
Haddii aadan fahmi karin sababta ay ujoog yihiin caleemaha spathiphyllum, markaa, waxay u badan tahay, caarada caarada ayaa bilaabay. Ugu horreyntii, cayayaanku wuxuu ka tagi doonaa oo kaliya dhirta huruudka ah ee caleemaha caleemaha, taas oo ugu dambeyntii gebi ahaan burburin oo qalalan. Waxaa cad in dhaqdhaqaaqa caarada caarada ay dhirta ka dhigayso mid aad u culus, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si degdeg ah wax uga qabato.
Caarada caaradu waxay leedahay qiyaas aad u yar - qiyaastii 0.2-0.5 mm, waxaadna ku arki kartaa oo kaliya qaybta hoose ee caleemaha, halkaasoo ay ku soo rogaan websaydh. Waxay u muuqdaan in ay ka yimaadaan qulqulka heerkul aad u sareeya qolka, taas oo sidoo kale keenta hawada hawada.
Haddii dhibco yaryar oo huruud ah ay muuqdaan ubax, waa in lagu daaweeyaa xal sabbo ama saliid macdan. Marxaladaha dambe ee caabuqa, waa lagama maarmaan in la daaweeyo daawooyinka - Fitoverma, Akarina ama Vertimek.
Waa muhiim! Spathiphyllum waa in lagu koraa meelo aan caadi ahayn oo aan lagu dhex gelin raajo toos ah.
Hababka wax ka qabashada aphids
Sida caarada caarada, aphid ayaa inta badan degaya qaybta hoose ee spathiphyllum. Waxay u keentaa waxyeello la'aan, sababtoo ah waxay si gaar ah ugu sii daadanaysaa dheecaanka geedka, taas oo horseedaysa fuuq-baxa caleemo iyo qallajin dhamaystiran oo isku dhafan. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah aphids oo ku noolaan kara ubax, dhammaantoodna waxay awoodaan in ay si dhakhso ah u badiyaan oo u guuraan dhir kale, taas oo ah sababta aad u baahan tahay inaad bilowdo dagaalka ka dhanka ah cayayaankan sida ugu dhakhsaha badan.
Aphid si aad ah ayey u saameeyeen xal nicotine sulfate, 1 g oo ah in lagu daro 1 litir oo biyo ah. Ujeedadaas oo kale, waxaad isticmaali kartaa xalka saabuun, laakiin marka la isticmaalo, ciidda dheriga waxay u baahan doontaa in lagu daboolo polietilen si markaa saabuunku uusan u dhacin xididdada geedka. Tirada daaweyntu waxay gaari kartaa xitaa shan illaa todoba, maaddaama hal mar lagu buufiyo ku dhowaad marnaba bixin boqolkiiba boqol.
Ma taqaanaa? Maqsinnada spathiphyllum waa caleemo, kaas oo ka soo baxa xididka laftiisa.
Sida loo burburiyo gaashaanka caleemaha
Shchitovka spatiphyllum ayaa u muuqata mid aan caadi ahayn, laakiin waxay si muuqata u muujineysaa oo si dhaqso ah u badiyaa. Ilaa inta gaashaanku uu weli yahay da 'yaryar, way adagtahay in la arko geedka. Kaliya mugdi madow oo si dhakhso ah u bilaabaya muuqaalka caleenta spathiphyllum iyo kuusarkeeda waxay awood u yeelan doonaan inay soo jeediyaan joogitaankooda.
Daawada dadka, taas oo ah xalka saabuun iyo tubaako, ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso shitovki. Si kor loogu qaado saameynta dagaalka, waxaad ku dari kartaa xalkaan ku xeeldheer iyo kerosene yar. Haddii shakhsiyaadka cayayaanka qulqulaya ay gaareen da 'weyn, waxaana lagu baari karaa indhaha qaawan, ka dibna xitaa waxaad ka saari kartaa dhirta qoyan qoyan, ka dibna waxaad u baahan doontaa inaad ku rushayso biyo saabuun leh.
Waa muhiim! Qalal-qaadashada Spathiphyllum waa in la sameeyaa guga kasta. Haddii dhirtu si xoog leh u korodhay - hubi inaad kordhiso dhexroorka dheriga. Qeybta hoose ee dheriga sidoo kale waxay u baahan tahay inay jiifsato lakabka ah dheecaan, taas oo bixin doona ilaalinta dhirta ka soo kallana.
Mealybug: Sidee ha u ogolaanin in dhirtu ay xanuunsato
Waxaa ka mid ah cudurada iyo cayayaanka ee spathiphyllum, ugu cibaadaysigu waa miisaanka. Waxay saameeysaa dhirta aad dhif u ah, laakiin badanaa waxay dhacdaa sababtoo ah fadeexad xad dhaaf ah ee ubaxa. Haddii spathiphyllum ka weyn tahay, inta u dhexeysa caleemaha ayaa heli kara gooryaanka, taas oo waqti ka dib si gebi ahaanba u burburin kartaa ubaxa.
Iyadoo raasamaal badan oo qulqulo ah, waxaa si fudud loo saaraa maro qoyan oo leh qamriga. Sidoo kale iyaga ka dhanka ah, waxaad isticmaali kartaa tincture ee maqaarka ka soo miraha citrus. Daawada ugu fiican ee ka soo horjeeda cayayaankan waa daawooyinka cayayaanka, dareenka taas oo si weyn loo kordhin karo illaa dhammaadka dhamaystiran ee macdanta. Dhirta ayaa sidoo kale u baahan doonta in lagu daaweeyo jilicsanaanta.
Kahortaga: sida loo ilaaliyo dhirta cudurada iyo cayayaanka
Cayayaanka iyo cudurrada spathiphyllum waxay u muuqdaan keliya marka geedo tayo liidata loo isticmaalo, iyo sidoo kale daryeel caafimaad oo aan haboonayn ee geedka. Si looga hortago dhacdooyinkooda, ee daryeelka spathiphyllum, waa inaad raacdaa xeerarka soo socda:
Qalitaan kasta oo dhir ah iyo dhalidiisa, u isticmaal carrada cusub, doorbidada iibsashada, sidaa daraadeed maahan wax cudur ah. Dharka iyo qalabka waa in sidoo kale la nadiifiyaa.
Maaraynta waa wax aad u faa'iido leh spathiphyllum, laakiin tani waa inaad u isticmaashaa falejo leh godad aad u yar. Taasi waa, inta lagu guda jiro buufinta ubaxa waa inay noqotaa daruuro microdroplets, oo maaha biyo caleemo. Ogsoonow haddii biyuhu ka dhexeeyaan afkoda iyo caleemaha, waxay u horseedi kartaa horumarinta kallanaaca.
Haddii aad dareento in xididdada la gooyey ee warshadda inta lagu guda jiro qaliinka, waa in laga saaraa, iyo budada qoriga waa in laga saaraa.
Daawada neefsashada ayaa si joogto ah u adeegsaneysa daroogada "Fitoverma", iyadoo xalka aad ku daadin karto spathiphyllum iyo ku buufin.
Goobta ugu dhow ee dheriga kaas oo spathiphyllum ku koraa, hayso weel biyo ah. Taas awgeed, qoyaanka hawadu waa la xajin doonaa xitaa jiilaalka, iyada oo kuleyliyeyaasha la shaqeynayo. Sidoo kale, ha ku dhejin dheriga wargeysyada meelo ay jiraan wax qabad. Waxay noqon doontaa mid faa'iido leh in la dhigo gabal xumbo ka yar dheriga si ay xididada spathiphyllum aan ka badnayn kolla daaqada qabow.
Laakiin Xeerka ugu muhiimsan ee ka hortagga cudurada spathiphyllum waa kormeer joogto ah ee warshadda for cudurada iyo muuqaalka cayayaanka. Haddii aad aragto ugu yaraan calaamadaha khatarta ah ee cudurka - isla markiiba bilaw daweynta oo ha u ogolaanin in ay ku faafaan ubaxyo gudaha ah.